SuperTuxKart inowedzera kuvandudza uye zvitsva mumhando yazvino vhezheni | Kubva kuLinux
SuperTuxKart inowedzera kuvandudza uye zvitsva mumhando yazvino vhezheni
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Mitambo
Pamwe uye vazhinji veavo vanowanzo kutamba Super Tux Kart iwe unotoziva nezve kugadzirisa uye nhau mune yazvino vhezheni yeiyi yakanakisa Clone ye Mario Kart, asi sezvo ini ndaive Debian yeshanduro 0.7.3, sezvo ini ndakanga ndisina kuziva.
Zvinoitika kuti ini ndaisa SuperTuxKart vhezheni 0.8.3 paArch Linux uye ndakave nekumeso kubva patakapinda main menyu.
Zvino tava nazvo NHOROONDO MUENZANISO !!! Nyaya inotanga kana vakaipa Nolok (anozviti ndiye Mambo weKart) anotapa mutungamiriri wevamhanyi, asiri mumwe kunze kweWildebeest kubva GNU.
Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, isu tinosarudza Kart uye isu tinofanirwa kufambira mberi zvinoenderana nenhamba yemapoinzi atiri kusvika nematanho. Zvese zvinotonhorera chokwadi.
Ini ndinonzwa zvakanyanya kuwanda iwo magiraidhi uye magadzirirwo eese ari enzvimbo nenzvimbo. Pakupedzisira Suzanne (iyo inobata monkey) inotaridzika zvakanaka, nekuti mune iyo Debian vhezheni yaive yakamonyaniswa, uye mazhinji emamepu akagadziridzwa.
Zvimiro zvakawedzerwawo, patino skid tinowana kumhanyisa kumhanyisa. Zvakare, bvunzo dzave kunetsa zvakanyanya.
Kupfuura chaiko chokwadi .. ini ndinotofanirwa kuzvivaraidza nenguva yangu yekusasununguka. 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Mitambo » SuperTuxKart inowedzera kuvandudza uye zvitsva mumhando yazvino vhezheni
Zvino ndoziva takarasika iwe. Uri kudanana neArch Linux zvishoma nezvishoma uye nekuita usingazvizive. 🙂
rega rima divi rechipenga rimunyengerere hahaha
Ini ndakanzwisisa kuti Elav aive neArch semumwe wake wekare anoda ajhaha
Pindura kune Rainbow_fly
Iwo maLinux macones aMario akanaka kwazvo, ini ndaisaziva kuti uyu aivapo, handigone kuzviedza, ndatenda nemupiro.
Izvi zvinondiyeuchidza zvakawanda zveiyo inoshamisa Crash Team Mujaho, XD!
Ini ndinobvumirana newe, sezvo iine kufanana kwakanaka kune iwo mutambo.
o hongu, ikozvino zvave nani ... zvakanaka sei !!!
Nakidzwa ipapo .. hehehehe
Zvakanaka, inguva dzekare nhau, ikozvino isu tinofanirwa kumirira vhezheni 0.9 kuti tione zvazvinounza kwatiri
Ini ndinonyanya kufarira mutambo uyu, zvekuti ndakatopedza nhangemutange yese negoridhe: P, uye ndichiri kuenderera mberi ndichiiridza, kwandiri ndiwo mutambo wakanakisa uripo munzvimbo dzekuchengetera
Hei Elav .. Ndinoda kuti iwe uite zvimwe zvinyorwa nezve Arch zvine chekuita nedesktop tsika. Mashandisiro ekushandisa madingindira akasiyana emifananidzo, windows uye nevamwe. Ndine kusahadzika nezvekushandisa kwayo sezvo ndanga ndajairira kuita gnome yakawanda uye ndinoona kuti haina zvakawanda, iwe wakariisa ne kde uye ndinoda kuziva zvakawanda nezve manejimendi yedesktop iyi. Zvakare ini ndakaisa Arch nemadhiraivha emahara asi sezviri pachena haashande chaizvo.Ngatiti iwe unogona kutsanangura maitiro ekuchinja pakati pesununguko neyemabhodhi pane bhodhi yeNvidia. Ini ndinofunga ndatozviparadzira ... Asi ini ndinovimba chimwe chinhu chinogona kutsanangurwa nezve zvandinoisa pano.
Mhoro Israeri ..
Zvakanaka, kuchine zvimwe zvinyorwa zveArch mupombi, saka ndichaedza kukufadza nepandinogona napo. 😉
Yakanakira desktop desktop. Ndiri kureva mashandisiro ekuchinja iwo maTray zvidhori pabhawa. Maitiro ekubatanidza madingindira semuenzaniso shandisa
translucent kumashure kweimwe theme uye shandisa menyu kumashure kweimwe theme. Sezvo ini ndakaedza kuzvibatanidza asi hazviratidzi sezvazvinofanira kuita dzidziso hahaha ... Uye pasina kupokana ndichave ndakatarisira kuzvinyorwa zvinotevera ... Kwazisai nekutenda nemhinduro
Uh! Handina kutamba Super Tux Kart kwenguva yakareba!
Ndinoida, mutambo unonakidza kwazvo uye chokwadi ndechekuti kugadzira rondedzero yenyaya inoita kunge yakanaka kwandiri.
Ndinovimba ine network yakawanda yevatambi modhi, nekuti ndisati ndamboita asi nemushini mumwe uye iyo keyboard zvinonetsa kubata pakati maviri.
MuDebian maive neLaunchpad ppa yekuchengeta zvinhu zviripo.
(Ini ndinovashandisa uye ivo vakasimba kwazvo, kunyangwe yangu Firefox alpha)
ChiGerman alvarez akadaro
Nhau diki dzekare. Kana ndikarangarira nemazvo, iyi vhezheni yakaburitswa kutanga kwegore rino.
Ngazvive sezvazvinogona, zvinowanzo kuve zvinomanikidzwa kukurudzira mutambo uyu kune avo vedu vanofarira kugoverwa kwedu kweLinux.
Pindura kuGerman Alvarez
Mutambo wakanaka. Chandinonyanya kufarira ndechekuti mwedzi wega wega kana zvakadaro pane mota kana track.
Uhh ndakashamisikawo pandakagadzirisa archlinux ndikaona kuvandudzwa kwe STK kunyangwe yatove yechinyakare, chinhu chitsva chandakaverenga mubhurogu ndechekuti matraki kubva kuOpen Street Mepu anogona kuendeswa kuSTK uye ndinofunga kuti mune ramangwana shanduro imwe yakaoma ichawedzerwa hahaha ini ndakanyatsonaka pamutambo uyu, hapana zano rakandiomera, kunyangwe iriwo chete chinhu chandinotamba hahaha
Ndinoiisa sei muKubuntu?
Ndine boot mbiri, ndosaka windows logito.
Ndinonzwisisa. Vanoramba vachinditsamwisa pandinotaura kubva kuWindows XP / Vista / 7/8.
Muchiitiko changu handina kumisikidza SUDO nezvikonzero zvekuchengetedza, ini ndinopinda seROTI, ndinonyora "apt-tora kuisa supertuxcart" pachikamu changu naDebian, ndinobuda ROOT nekubuda nekutamba.
Ndanga ndaverenga kutenderera kuti vaiyedza vachishandisa maWii kutonga kutyaira mota muna Mar ... ndinoreva, Tux Kart. Elav, unoziva kana iyi vhezheni ichisanganisira izvo kare?
Iyo yazvino vhezheni yatove muna debian jessie, uye zvakare mune iyo wheezy backports
Zuva rakanaka. Iye zvino ndichatanga kutamba.
Ndatenda, ndave kutoyedza ...
Kuburitsa kukuru uye kuyedza 😀
shini kire akadaro
Yekupedzisira vhezheni, zvinoreva kuti hakuchazovazve neshanduro, handiti? D: senge 1.x? u__u! Ndakanga ndiine chirongwa ichi zvimwe
Pindura kune shini-kire
Yakawanda Kuverenga pane Ngatishandise Linux: June 2013